Posted by ကို Tranquillus | ဇူလိုင်လ 5, 2018 | အွန်လိုင်းသင်တန်း
အဆိုပါမက်ဆေ့ခ်ျနှစ်ဦးစလုံးပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရနှင့်ပညာရှင်ပီသစွာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်ရေး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာကြပါပြီ။ သူတို့ကရေးသားပေးပို့ဖို့အမြန်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ချက်ချင်းလက်ခံသူရောက်ရှိဖို့။ ရိုးရာမေးလ်သည်သူတို့နောက်လိုက်ဖို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေမှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြပြီးဘာင် ပလက်ဖောင်း iBellule သုံးနာရီကြာတဲ့ကာလအတွက်စုစုပေါင်းနှစ်မြှုပ်ခြင်းအတွက်တိုတောင်းတဲ့လေ့ကျင့်ရေးအားဖြင့်သင်တို့ကိုဆုံးမသွန်သင်မှအဆိုတင်သွင်း။ အဆိုပါနည်းလမ်းကို, တိကျသောနှင့်ကွန်ကရစ်, ထိရောက်သောမက်ဆေ့ခ်ျကိုရေးနှင့်လုံခြုံစိတ်ချစွာသံတမန်ရေးဖြစ်ရပ်များဖြစ်ပေါ်စေရန်သင်မည်သို့သွန်သင်သည်။
အဆိုပါ iBellule ပလက်ဖောင်းများ၏အဖွဲ့သည်အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ပါတယ် ဗော်တဲယားစီမံကိန်းကိုစာလုံးပေါင်းရန်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုသင်တန်းပေးခြင်း။ အဆိုပါ site ကိုနှင့်ဗော်တဲယားစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုကိုလူတိုင်းတက်တိုက်သို့မဟုတ်စာလုံးပေါင်း, သဒ္ဒါနှင့် syntax တိုးတက်လာဖို့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရှိန်အဟုန်မှာအလုပျလုပျဖို့ခွင့်ပြုပါ။
မသာပြဿနာများကိုရေးဆွဲရေးအတွက်မေးလ်ပြင်သစ်ဘာသာစကား၏မသငျ့လျြောအသုံးပြုမှု, ဒါပေမယ့်လည်းအီးမေးလ်ဖွဲ့စည်းပုံ၏တူညီသောပြဿနာနားလည်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောအမှားအယွင်းများခဲ့ကြသည်အချက်ကိုထောက်ပြ, ဗော်တဲယားစီမံကိန်းက၎င်း၏လေ့ကျင့်ရေးမွမ်းမံရန်လိုခငျြနှင့်ရန်ဆုံးဖြတ် အီးမေးလ်များရေးသားဖို့အထူးဆက်ကပ်အပ်နှံတစ်ဦးသင်ယူမှုဖန်တီးပါ။
တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အီးမေးလ်ကိုရေးသားဖို့ပြီးသားသံတမန်နှင့်နည်းပညာရှုထောင့်ကိုနားလည်ရမယ်: reply အပေါင်းတို့အား reply သူတို့ဖြည့်ဖို့ဘယ်လို, တစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှပေါ်လာသို့မဟုတ်မပြုလုပ်သင့်အဖြစ်လက်ခံသူများမှတ်ပုံတင်ရမည်ဖြစ်သည့် box ထဲမှာသင့်တယ် ထိထိရောက်ရောက်ဘာသာရပ်လိုင်း ... ထိုအခါအကြောင်းအရာပြဌာန်းနှင့်ယဉ်ကျေးဖော်မြူလာ၏ရွေးချယ်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဒါကြောင့်သင်တန်းဖြစ်ပါသည်ကတည်းကနောက်ဆုံးသေံမကျြနှာကိုမှဖုန်းသို့မဟုတ်မျက်နှာပေါ်မှာဆွေးနွေးမှုနှင့်မတူဘဲ, သင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများနှင့်အရေးအသားရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင့်လျော်သောဖြစ်သင့်ကိုသူ့အဘို့အဓိပ်ပာယျနှငျ့ဆနျ့ကငျြယူနိုင်ပါသည် တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အီးမေးလ်ထဲမှာသင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုထောကျပံ့ဖို့အပြုံးပုံအသုံးပြုခြင်း၏အဘယ်သူမျှမမေးခှနျးက။
iBellule ပလပ်ဖောင်းသည် အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များ မွေးဖွားလာခဲ့သည့် ဤမေးခွန်းအားလုံးကို ဖြေရန်ဖြစ်သည်။e-mail, ဘယ်သူ့ဆောင်ပုဒ်လဲ" တစ်ခုချင်းစီကိုဝန်ထမ်း client နှင့်အဖွဲ့များအားဖြင့်တန်ဖိုးထားပါလိမ့်မည်ကြောင်းထိရောက်သောအီးမေးလ်များရေးသားဖို့ခွင့်ပြုရန်။ "
သငျသညျပုဂ္ဂိုလ်ရေးအီးမေးလ်ကိုအဘို့သင့်ဖော်မြူလာနှင့်အသေးစားလက်ခံသူများအမှားအယွင်းများအတွက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တတ်နိုင်လျှင်ဧကန်မလွဲ, ဤကပင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မေးလ်ဘို့, အကျိုးဆက်များသင့်ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ဖြစ်နှင့် သို့ဖြစ်. သင်၏ကုန်သွယ်များအတွက်နိုင်ပါတယ်ပါဘူး စီးပွားဖြစ်။
သင်တန်း iBellule ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းခေါင်းစဉ်များ
ရိုးရှင်းပြီးထိရောက်သော layout ကိုချမှတ်
နှင်ထုတ်ဖို့ 8 ဖော်မြူလာသိမှတ်ကြလော့
1 - ငါအီးမေးလ်တစ်စောင်လက်ခံရရှိ
အီးမေးလ်လက်ခံရရှိသည့်အခါသင်ဘာလုပျသငျ့သလဲ ကတုံ့ပြန်ရန်နှင့်သင်လွှဲပြောင်းနိုင်, အားလုံးဖြည့်ဆည်းရမယ်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည် ...
2 - လက်ခံသူများ, ဘာသာရပ်နှင့် attachment များကို
ဒါဟာဘယ်အရာကိုတစ်ဦးချင်းစီအပိုင်းနားလည်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာ Nestle သံတမန်ရေးဖြစ်စဉ်များဒီအဆင့်မှာမကြာခဏဖြစ်သကဲ့သို့အသီးအသီး function ကိုကျွမ်းကျင်ဖို့မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။
3 - အီးမေးလ်အကြောင်းအရာ
အီးမေးလ်များစုံစုံနှင့်ထိရောက်သောဖြစ်သင့်သည်။ ယဉ်ကျေးဖော်မြူလာ၏အစနှင့်အဆုံးခေါ်ဆိုမှုမှအဆင်ပြေအောင်ရမည်ဖြစ်သည်နှင့်သေံမေးလ်ကဲ့သို့တူညီသောမဟုတ်ပါဘူး။ အတွေးအခေါ်များကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ကသင့်လျော်တဲ့ဘာသာစကားသုံးစွဲဖို့သင့်လျော်သည်ကိုချက်ချင်းနားလည်သဘောပေါက်သင့်ပါတယ်။
အဆိုပါတင်ဆက်မှုလည်းအရေးပါသည်နှင့်ဤ module တစ်ခုကိုလည်းရှောင်ရှားဖို့အမှားတွေအမှာစကားပြောကြား။
4 - အီးမေးလ်တစ်စောင်တိုင်ကြားချက်သို့မဟုတ်မကျေနပ်မှုမှအဖြေ
မဆိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း fallible ဖြစ်ပါတယ်နှင့်သူ၏ဖောက်သည်များ၏မျက်ကြုံတွေ့နေရသည်။ သံတမန်ရေးကုမ္ပဏီမှအရေးကြီးသည် spam များကိုတိုင်ကြားမှုများ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်, ငါးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိစ္စရပ်များကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခံရဖို့, အကောင်းတစ်ဦးဂုဏ်သတင်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်။
ဒါဟာအားလုံးသင်တန်း browse မှစုစုပေါင်းနှစ်မြှုပ်ခြင်းခန့်သုံးနာရီကြာပါတယ်။ သငျသညျအထိခိုက်မခံပြဿနာများကို၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသင်တန်းနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြောင်းဖို့ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ interface ကိုပထမတစ်ချက်မှာအတော်လေးအလိုလိုသိနှင့်နားလည်ဂရပ်ဖစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအလေ့ကျင့်ရေးနည်းပညာနှင့်အတူကျွမ်းတဝင်မရှိသောလူများအင်တာနက်နှစ်ခုစလုံးအပြစ်တွေရည်ရွယ်သည်။
သင့်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုင်းတာရန်, သငျသညျ, အလေ့အကျင့်စမ်းသပ်မှု go သင့်ရဲ့ကနဦးအဆင့်အနေနဲ့အကဲဖြတ်အချိန်စာရင်းနှင့်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ကိုအတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါနည်းလမ်းကို iBellule Sylvie Azoulay-ဘစ်မတ်, စီးပွားရေးအရေးအသားအတွက်အထူးကု၏စာရေးဆရာတီထွင်ခဲ့သည် "တစ်ဦးလိုလားသူ e-mail, ဖြစ်ခြင်း" ။
သူမသည်အီးမေးလ်များအဖြစ်ပြောတတ် "ကို manual မပါဘဲကျွန်တော်တို့ကိုပေးအပ်ခဲ့တဲ့ tool တစ်ခု" အဖြစ် နှင့်ဤကြီးကြပ်ပြင်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ပါသည်။ သူမသည်သင်ချင်တယ်နေရာတိုင်းမှာယူလက်ခံသူကောင်းစွာတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ယုတ္တိအီးမေးလ်များရေးသားဖို့ခွင့်ပြုရန်ဤ module ကိုဒီဇိုင်းလုပ်ခဲ့တာပါ။ စာရေးသူ, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဗန်းစကားကိုရှောင်ကြဉ်တိုတိုနှင့်အပြုသဘောနေဖို့ဟုပြောသည်။
Sylvie Azoulay-ဘစ်မတ်လည်းငါတို့လည်ပတ်ပုံကိုစိတ်ဝင်စားသည်။ သင်သည်သင်၏အီးမေးကိုရေးလိုက်သောအခါ, သင့်ဦးနှောက်၏လက်ဝဲ hemisphere နှင့်အတူရှိနှငျ့သငျခကျြခငျြးဖတ်လျှင်, အစဉ်အမြဲဒီ hemisphere ကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျသတင်းအချက်အလက်အခြားတ hemisphere ကနေစီးဆင်းခွင့်ပြုပါရန်ပင်အလွန်အကျဉ်းခဏတစ်ချိုးစေပြီးတော့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရူပါရုံကိုရှိပြီးသင်တို့အဘို့ကပိုရှုထောင့်ပေးသောလက်ျာ hemisphere နှင့်အတူကိုဖတ်ရှုရမည်ဖြစ်သည် သင့်ရဲ့အရေးအသား၏အရည်အသွေးတို့ကိုစစ်ကြောစီရင်ရန်။
သူမကအခိုင်အမာဆိုထားသည်သောနောက်ဆုံးအချက်နှစ်ခုတာဝန်များကိုအကြားထားအချိန်များတွင်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးသင့်ရဲ့အီးမေးလ်များကိုအာရုံစူးစိုက်ဖတ်ခြင်းနှင့်ရေးသားဖို့လိုအပ်ကြောင်းဖြစ်ပါသည် အရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားစေခြင်းငှါမ ရောက်ရှိကြောင်းကိုအသီးအသီးအီးမေးလ်အသစ်မှသူ့ကိုယ်သူကွားဖွတျ။
retention ကိုတိုးမြှင့်ဖို့မှတ်ဉာဏ်အုပ်ချုပ်သောယန္တယား၏သိပ္ပံဆိုင်ရာအသိပညာပေါ်တွင်အခြေခံကြောင်းအဆိုပါအောက်မေ့ဖွယ်ကျောက်ဆူး technique ကိုအပေါ်အခြေခံပြီး iBellule လေ့ကျင့်ရေး။
လူတစ်ဦးချင်းစီ၏သူ့ကိုယ်ပိုင်လမ်းရှိပါတယ် အလွတ်ကျက် အမျိုးမျိုးသောယန္တရားများ အသုံးပြု. ။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအောက်မေ့ဖွယ်ကျောက်ဆူးအတုထောက်လှမ်းရေးပေါင်းစပ်ပြီးအသုံးပြုပုံ WOONOZ အကောင့်သို့တစ်ခုချင်းစီ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဝိသေသလက္ခဏာများကြာတဲ့လုံးဝသီးခြားအစီအစဉ်ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
WOONOZ 2013 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအနေနဲ့ဆန်းသစ်နည်းပညာကုမ္ပဏီ၏အခဲနှစ်စဉ် hyper အတွက်တရာကုမ္ပဏီများအားအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ "ပြင်သစ် Tech မှ Pass ကို" တံဆိပ်ရရှိထားသည် "ပြင်သစ် Tech မှ။ "
အဆိုပါအောက်မေ့ဖွယ်ကျောက်ဆူးနှင့်ဆက်စပ်သောသူတို့ရဲ့ဖြေရှင်းချက် - လူအတော်များများအခါသမယအပေါ်အနိုင်ရ - တစ်သင်တန်းပေးခြင်းရလဒ်များ၏ဝန်ဆောင်မှုမှာတပ်မက်လိုချင်သောရေရှည်တည်တံ့သို့မဟုတ်တုံ့ပြန်မှုသတင်းအချက်အလက်အစာရှောင်ခြင်းသိုလှောင်မှုကိုသေချာ၏အန္တိမရည်မှန်းချက်ရှိပါတယ် "Testable ခေံနှင့် Certified ။ "
WOONOZ နှင့်အသိပညာခုနစ်ခုရက်အတွင်းမေ့လျော့နေကြတယ်တဲ့လေ့ကျင့်ရေးကာလအတွင်းကယ်နှုတ်တော်မူ၏သတင်းအချက်အလက် 80% ၏စိုးရိမ်ဖွယ်ရာနှုန်းကိုနှိမ့်ချမှမှတ်ဉာဏ်အုပ်ချုပ်သောယန္တယား၏ neuroscience ရှာဖွေတွေ့ရှိအသုံးပြုသည်။
အဆိုပါနည်းလမ်းကို WOONOZ ကျောင်းသားတစ်ဦး၏အသိပညာ၏အဆင့်ကိုပြုလုပ်ရှာမှီး၏သတင်းအချက်အလက်နှင့်အရှိန်အဟုန်သိုလှောင်လမ်းကိုပြုပြင်ရေးဆွဲပြီးအားဖြင့်သင်ယူမှု၏သက်ရောက်မှုအား။ အဆိုပါ drive ကိုမှန်ကန်အချိန်အတွက်ကိုက်ညီနှင့်ဘယ်တော့မှလွတ်ကျက်နဲ့တူကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ။
ဒါဟာအတုထောက်လှမ်းရေးတရားစီရင်ရေးကိုသုံးခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်အလွန်အစွမ်းထက် algorithms မှတဆင့်ကျောင်းသားအသုံးချခံရဖို့အဆင့်ဆင့် process လုပ်တယ်ကြောင်း iBellule module ကိုသင်ယူဖို့လျှောက်ထားပါတယ်။ အဆိုပါလေ့ကျင့်ရေးပရိုဂရမ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ကးအဆိုပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ artificial ထောက်လှမ်းရေးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအယူအဆတွေမရေနှင့် unvested စဉ်းစားနဲ့ပိုကောင်းတဲ့အလွတ်ကျက်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြဖို့အစီအစဉ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ။
အဆိုပါ iBellule ပလက်ဖောင်း€ 19,90 တစ်အခကြေးငွေများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီမှလေ့ကျင့်ရေးပေးထားပါတယ်။ ရိုးရှင်းစွာအ၎င်းတို့၏ site ပေါ်တွင်သင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်နဲ့မျှမျှတတအခြေခံပဟေဠိထုတ်ဖြည့်ပါ။
, ငွေပေးချေမှုစစ်ဆေးမှုများသို့မဟုတ် PayPal ကအားဖြင့်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမယ့်ခရက်ဒစ်ကဒ်အားဖြင့်မရရှိနိုင်သတိပြုပါ။
အဆိုပါဘာသာရပ်၏နောက်ထပ်လေ့လာမှု, သင်သင်တန်း iBellule များ၏ content ပေါ်ပူးပေါင်းခဲ့သူစာအုပ် Sylvie ဘစ်မတ်-Azoulay ရနိုင်သည် "တစ်ဦးလိုလားသူ e-mail, ဖြစ်ခြင်း", (ဖြန့်ဝေဖယ်ထုတ်ပြီး) 15,99 €ထံမှအမေဇုံအပေါ်ရရှိနိုင်ပါ။
သင်နှင့်သင့်န်ထမ်းအကျိုးဆက်များ၏တစ်ခါတစ်ရံတွင်စုစုပေါင်းပေါ့ဆမှုကျူးလွန်ခဲ့ကြဘူးနဲ့ရိုးရိုးထိရောက်မှု၌သင်တို့၏ကုန်သွယ်ရေးအမြတ်မှ e-mail များ၏အရေးအသားပိုကောင်းအောင်သေချာဖြစ်စေရန်, iBellule လေ့ကျင့်ရေးတစ်ဦးမှတဆင့်ဖန်တီးတစ်ခုအစွမ်းထက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ် စာပေအီးမေးလ်များ၏ဤမြင့်မားအထူးပြုလယ်ပြင်၌တစ်ဦးအထူးကုအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးအကြောင်းအရာနှင့်အတူဆန်းသစ်သောအယူအဆနှင့်သန့်စင်။ သုံးနာရီကြာမှာ iBellule လေ့ကျင့်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီအဖွဲ့ဝင်နေ့စဉ်အသက်တာ၌လျှောက်ထားနိုင်ပါလိမ့်မည်သင်ယူအပေါင်းတို့နှင့်တကွဆက်ပြီးဒြပ်စင်အထက်တွင်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါ iBellule လေ့ကျင့်ရေးအဘယ်သူ၏အကြိုးခံစားခှငျ့ချက်ချင်းနေ့စဉ်များမှာတစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပါပဲ။
အွန်လိုင်းသင်တန်းပေးခြင်းပလက်ဖောင်း iBellule ၏တင်ဆက်မှု မေလ 13th, 2020Tranquillus